सेक्स | Rochak Khabar
सेक्स गर्दै हुनुहुन्छ : यस्ता गल्ती कहिल्यै नगर्नुहोस, सधै भरी पछुताउनु पर्ला !
25 Dec, 04:07 AM
पातलि युवतीसँग यौन सम्पर्क राख्नको मज्जा नै छुटै …..पुरा पढ्नुहोस
अहिले मानिसहरू धेरै भन्दा धेरै यौन सन्तुष्टि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चासो राख्ने गर्छन्। कतिले त यौन सन्तुष्टि पाउने नाममा लिंगको आकार बढाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। सञ्चारमाध्यममा गरिने यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञापनको आधारमा लिंगको आकार बढाउन औषधि समेत...
10 Nov, 03:44 AM
सेक्स टुरिज्मका १० देश, जहाँ छानी-छानी युवती पाइन्छ केही मानिसहरुका लागि टुरको योजना फुल रोमान्चकता हुन्छ । सेक्स टुरिजम यस्तै रोमाञ्चकताको एक भाग हो । जो कयौं देशका लागि सबैभन्दा छिटो र धेरै कमाइ गर्ने स्रोत पनि हो । जहाँ ग्राहकका रुपमा धेरै पुरुषहरु सहभागी हुन्छन् भने सर्भिसका लागि बढी महिला । करोडौंको क...
23 Oct, 02:54 AM
सेक्स समयलाई जतिसक्दो लम्ब्याउने उपायहरु
सेक्स हतारमा गर्ने गर्नु हुन्छ कि क्या हो ? सेक्स गर्दा तपाई को पार्टनर कसरि संतुष्टी दिनु हुन्छ ? यस्तै केहि प्रश्न को उत्तरहरु छन् ताकी तपाईं को सेक्स जीवन अझै अत्यन्तै मिठास होस् । लामो समय सेक्स नहुनु या शीघ्र स्खलन एउटा आम समस्या हुन् । तल उल्लेखि...
16 Oct, 03:33 AM
श्रीमानलाई सेक्स सन्तुष्टि दिलाउन यौनांग टाइट पार्ने उपाय म २५ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । मेरो तीन वर्षको बच्चा छ । मेरा श्रीमान् मसँग यौन सम्पर्क गर्दा मजा आउँदैन भन्नुहुन्छ । मेरो योनी टाइट छैन भन्दै झर्किने गर्नुहुन्छ । यसले गर्दा हाम्रो पारिवारिक जीवनमा नै दरार आउलाजस्तो भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा म मेरो श्री...
15 Oct, 02:43 AM
सेक्स सम्बन्धी ७ अनौठा तथ्य ! जुन कसैलार्इ थहाँ छैन !
यदि पोथी फेरिट (दुम्सीजस्तो एक प्रकारको जनावर) तातो भएको बेलामा तत्काल यौनसम्पर्क गर्न भाले पाएन भने मर्न सक्छ । तातो लामो समयसम्म रह्यो भने एस्ट्रोजेनको लेभल बढ्छ, जसले अप्लास्टिक एनिमिया हुन्छ र यो जनावरको मृत्यु हुन्छ ।
9 Oct, 03:15 AM
राशी अनुसार फरक हुन्छ मानिसको यौन चाहना; जान्नुहोस् कुन राशीको कती यौन चाहना मानसिक र शारिरीक रुपमा स्वस्थ रहन पनि यौन जीवन आवश्यक हुने मनोपरामर्शदाताहरु बताउँछन् । यसैगरी यौनको मामलामा पनि मानिसहरुमा फरक फरक गुण र व्यवहार हुन्छ । कसैलाई यौन सम्बन्ध राख्दा सादा तरिका मन पर्छ भने कसैलाई विभिन्न तरिका । 1
9 Oct, 03:05 AM
सेक्ससँग जोडिएका आश्चर्यजनक कुराहरु यस्ता छन
महिलाको लागि सम्भोग एउटा प्रभावकारी पेनकिलर हो । यौनक्रियाका बेला शरीरमा एन्डोमार्फिन स्राव हुन्छ । यो शक्तिशाली पेनकिलर मानिन्छ ।
9 Oct, 02:54 AM
के ब्रतको समयमा सेक्स गर्न हुन्छ त?
नेपालमा विभिन्न धार्मिक र पैत्रिक अनुष्ठानमा व्रत बस्ने चलन छ । व्रत बस्दा कुनै विशेष खाने कुरा नखाने गरिन्छ । भारत र नेपालमा पनि खासगरी हिन्दु धर्माल्बीले ब्रतलाई विशेष महत्वपूर्ण समयकोरुपमा श्रद्धा गर्छन् । एकादशी,कृष्ण अष्टमी, तीज जस्ता पर्वमा व्रत बस्...
7 Oct, 02:37 AM
असुरक्षित यौन सम्पर्क भयो? गर्भ बस्न नदिन यस्तो उपाय अपनाउनुहोस्
सेक्स गर्नुस् तर, सावधानी अपनाएर । सेक्स कहिले र कसरी गर्ने, महिनावारीमा सेक्स गर्ने वा नगर्ने । गर्ने हो भने कहिले गर्ने ताकि गर्भ नरहोस् । यस्ता केही प्रश्नबाट अधिकांश युवायुवती परेशान हुन्छन् ।
5 Oct, 03:06 AM
3 Oct, 03:23 AM
यौन सम्पर्क गर्दा पानी पिउनु पर्छ भन्छन्, के यो साँचो हो ? बढी हस्तमैथुन गर्दा ओठ सुक्छ, किन होला ?
हस्तमैथुनको क्रममा लिंगलाई बटार्ने, भाच्ने गर्नु भयो भने तपाईलाई समस्या हुन सक्छ : डाक्टर खेम कार्की
बिगत २० बर्ष देखि युवा तथा किशोर किशारीसँगै काम गर्दै आउनु भएका डाक्टर खेम कार्की निशुल्क परामर्शदाता पनि हुनुहुन्छ । 0
30 Sep, 02:20 AM
30 Sep, 02:11 AM
यस्ता छन् सन्सारका सेक्स सम्वन्धि १५ बिचित्र नियमहरु ! थाहा पाई राख्नुहोस्
अमेरिकाको वेस्टर्न पेसिफीक ओसियनको केटाहरुको पूर्णकालीन काम नै गाउमा घुमेर कुमारी केटीहरुको कुमारित्व भङ्ग गर्ने हुन्छ । कारण त्यहा कुमारी केटीहरुको विवाह हुदैन ।
22 Sep, 04:13 AM
द्यपी अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्ने मान्यता भने हामीमाझ स्थापित छ । तर, अध्ययनहरुले भनेका छन् कि रातिमा भन्दा विहानको सेक्स उत्तम हुन्छ । कारण एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अनुशन्धानहरुले विहानमा सेक्स गर्ने विभिन्नकारणहरु पत्ता लगाएका छन...
21 Sep, 03:30 AM